Amanani entengo okuba ne-Apple Store e-Union Square eSan Francisco | Ngivela kwa-mac
Amanani entengo yokuba ne-Apple Store e-Union Square eSan Francisco
Izitebhisi zengilazi ku-Apple Store yazo esanda kwethulwa ku- ISan Francisco Union Square, kubiza $ 33,333 khuphuka izitebhisi zengilazi, ngenkathi isakhiwo sibiza nxazonke $ 19 million, ngokusho kwezimvume ezisemthethweni zokwakha ezitholwe yi-'Patently Apple '.
Izinhlelo zokufafaza zebhilidi zazinezindleko ezilinganiselwayo $ 2.28 million, ukufakwa kwamandla elanga ezindlekweni zophahla $ 800.000ngenkathi kufakwa amanye amaphaneli $ 150,000.
Lapha kuvuleka iminyango ye-Apple Store pic.twitter.com/cOIoM1EChb
- UMathewu Panzarino (@panzer) May 19 we-2016
Nakhu ukuwohloka okuphelele kwezinye izindleko:
$ 2.28 wezigidi: Izindleko eziphelele zokuthuthukisa uhlelo lokufafaza lwesakhiwo.
$800,000: Inani lamandla elisebenza ngamandla elanga elingu-50 kilowatts ophahleni.
$250,000: Intengo yengaphakathi nengaphandle lesakhiwo.
$150.000: Izindleko zokufaka ama-solar panel.
$100,000: Intengo yokudilizwa kwesitolo esidala.
$100,000: Ukuthuthuka kokuzamazama komhlaba kwesitezi sesibili nophahla.
$82.000: Izindleko zokufaka izimpawu ngaphandle kwesakhiwo.
$50.000: Intengo yamashalofu esitolo.
$4.000: Intengo yama-alamu omlilo.
Izimvume zokwakha azikacaci ngokuthi abiza malini amasango amakhulu. Iminyango emikhulu, etholakala ezinhlangothini zombili zesitolo, ingamamitha angu-42 nezinyawo ezingama-40 ububanzi lapho ivuliwe (kusuka kumamitha ayi-10 kuye kwayi-12).
Izindleko ziphansi kakhulu nokuthi kubiza malini ukwenza iSitolo se-Apple, umbuzo wami ukuthi ngabe ngemuva kwalokhu benza inzuzo. Noma ingabe kuyindlela nje ye- ukukhangisa ukuba ne-Apple Store endaweni enjalo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » Amanani entengo yokuba ne-Apple Store e-Union Square eSan Francisco
Enye iwebhusayithi ekhethekile yezintengo ezingamasekeni e-Mac
Isitoko esiphansi se-Thunderbolt Display ku-Apple Store